कुलमान प्राधिकरणमा फर्किन नपाए के छन भावि योजना ? « Naya Bato
कुलमान प्राधिकरणमा फर्किन नपाए के छन भावि योजना ?
‘यदि जनचाहनालाई कु’ल्चिदै सरकारले तपाईंलाई कतै पनि नियुक्ती दिएन भने तपाईंका व्यक्तिगत योजना के छन् ? जनताले तपाईंलाई कस्तो भूमिकामा देख्न पाउलान् ?’ भन्ने प्रश्नमा कुलमान भन्छन- ‘मलाई कुनै हतारो छैन ।’
भावि योजनाका विषयमा कुनै ठोस निर्णय लिइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने सोच्दैछु । मैले जहाँ पायो त्यहाँ हात हाल्न पनि मिल्दैन । कुनै कम्पनीमा जागिर खाएर बस्ने कुरा पनि आएन । राम्ररी सोचेर निर्णय लिन्छु ।’
कुलमानका कट्टर समर्थकहरुले उनलाई अब प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकभन्दा माथिल्लो ओहदामा देख्न चाहन्छ । उनले राजनीतिमा आएर मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोल्नुपर्छ भन्नेहरु पनि छन् । ‘भोलि राजनीतिमा आएर मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा तपाईंको विकल्पमा पर्छ कि पर्दैन ?’